မင်းသမီး​လေးရတနာဗိုလ်လည်း Snail Wish လေးလိမ်းတဲ့အပြင် New Skiin maskပဲ ကပ်အိပ်တာနော်😘 ကိုယ်တွေလည်း နေ့စဉ်Snail လိမ်းပြီး ၃ရက်တခါ ကပ်ဖြစ်တယ်😍😍😍 ရလဒ်ကတော့ အရင်ကထက် ၁၀ဆ ဖြူလာတယ် ကြည်လာတယ် ဆိုတာပဲ☘️☘️☘️☘️crd. New Skiin mask ၁ဘူး 15000ks(5ချပ်ပါ) Snail Wish Cream 29500 09790237282📲📲📲
Mask New Skin ဆိုတဲ့အတိုင်း ကပ်ပီးပီးချင်းကို တကယ် New Skinပါပဲ😱😱 Mask ‌တွေဘယ်လောက်ကပ်ကပ် အသားအရေကို စိတ်တိုင်းမကျသေးဘူးလား. ဒါဆို တကယ် ‌ကောင်းမွန်တဲ့ Mask ကို မသုံးရသေးလို့ပါ. 💎New Skiin Whitening Selfie Face Mask💎 က ‌အောက်ပါ အချက် ၃ ချက်နဲ့ သင့်အသားအရေကို ပြုပြင်ပေးပါတယ်. ၁. အသားအရေ ဖြူဝင်းစေခြင်း ၂. အရေပြားအစိုဓါတ် ဖြည့်တင်းပေးခြင်း ၃. နူးညံ့သော အထိအတွေ့နှင့် တင်းရင်းလှပလာစေခြင်း ( သင့်မျက်နှာအသားအရေကို ဆွဲတင်း‌ပေးနိုင်သော Tencel Sheet ကို အသုံးပြုထားခြင်း) မထိရောက်တဲ့ Sheet Mask ‌တွေအစား တိတိကျကျ ထိထိရောက်‌ရောက်‌လေး‌တွေကပ်ရအောင် . . . Price ~ 3000 ks 5ခု ပါ 1ဖာ~ 15000 ks #NewSkiinMask #TheBestMaskEver #09790237282📲📲📲
New skiin mask. နဲ့ ပေါင်းတင်ထားတဲ့ မတ်မတ် အသားရေ ဘယ်လောက်လှလဲပြော😌 How to use? သိပ်ကို လွယ်ကူပါတယ်နော် ညဘက် မျက်နှာလေးသစ်ပြီး mask လေးကို ၁၅ မိနစ်လောက် ကပ်ပေးရုံပဲ 💢၁၅ မိနစ်ဆို လုံလောက်ပြီနော်💢 💢mask ခွာပြီး မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့ အနှစ်လေးတွေကို လက်ဖြင့် အနှံ့ လိမ်းပေးရုံပဲ အသားအရေ လုံးဝ ကြည်လင်သွားစေရမယ်🙆 တစ်ချပ် ၃၀၀၀ တစ်ဘူး ၅.ချပ် ပါ ၁၅၀၀၀ 09790237282📲📲📲 crd
Snail.29500ks New skiin.3500ks All in one tone up cream 09790237282📲📲📲
ရာသီဥတုမရှေး စိတျတိုငျးကြ လှပတဲ့ အသားအရရေရှိဖို့က Snail Wish Whitening Cream တဈဘူးပဲလိုတယျ အသားဖွူဝငျးလာ‌စမေယျ အရေးအကွောငျး သကျသာ‌ပြောကျကငျးမယျ တငျးတိတျအမညျးစကျတှေ သကျသာ‌ပြောကျကငျးမယျ ၀ကျခွံအမာရှတျတှေ အမွနျဆုံး ပွနျလညျပွညျ့တငျးလာမယျ ကွညျလငျဝငျးပပွီး Glow Look ကို ခကျြခငျြးရရှိလာ‌စတေယျ Snail Wish Whitening Cream 50g တဈဘူး ၂၉၅၀၀ ကပျြ #SnailWishWhiteningCream #TheBestQuality #09790237282
Ma Su Myat Yi
🔊ဘယ် super market ဘယ်ဆေးဆိုင်မှာမှ ရှာမရတဲ့ Garnier Vitamin C Super Essence နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် သောက်တဲ့ အသားလှ နုပျိုဆေး စု ဆီမှာ အားပေးလို့ ရပါပြီ။ 💐မင်းသမီးလေး လှတာအားကျပါသလား။ သူ့လို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်နိုင်ရင်တောင် သူသောက်တဲ့ ဆေးလေး လိုက်သောက်လေ။ သူ့တ၀က်လောက် လှလာ နည်းသလား။ 💸စုတို့ agent တွေလို Cosmetics ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေ သုံးပြီး လှလှပပ ငွေ၇ွှင် ချင်ပါသလား။ စုတို့ လို Focus beauty agent ၀င်လေ။ တွေဝေမနေနဲ့ ☎09420771491ကို မြန်မြန်ဆက်။ အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာ ကြာကြာမနေဘူး ၃၁၊ ၀၃၊ ၂၀၂၀ အထိပဲ ရမှာ။
Ma Su Myat Mon
Ma Nwe Nwe Naing
New skiin အသားဖွူဆေးလာပါပွီရှငျ
အင်ဒို ထုတ်​ရောင်းပြီး Singapore ဒိုးမယ် ခြေလှမ်း စဖို့ ဗူးရေ ၁၂ဗူးယူရုံနဲ့ရမယ် ၂၄ဗူးယူသူတိုင်း ၁​ဗူးအပ်ိုလက်ဆောင်ပေးမယ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုသူတိုင်း မတ်မတ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Crd ☎09786348545 Ygn agent
First Page « 181 182 183 » Last Page